शिक्षा - Tulsipur Khabar शिक्षा - Tulsipur Khabar
ज्ञानज्योतिमा स्मार्ट प्रोजेक्ट मार्फत पढाई
तुलसीपुर, २८ कार्तिक ‘मेडमले पढाएको पनि बुझिन्छ । त्यहाँ देखाएको झन धेरै बुझिन्छ ।’ ज्ञानज्योति आधारभू्त विद्यालय तुलसीपुरमा कक्षा १ मा पढ्दै गरेकी बबिता नेपालीले भन्नुभयो । बबिताले त्याँ भनेर संकेत गरेको कक्षा कोठामा राखेको एल. ई. डी टिभिलाई थियो । बबिताको कुरा सकिन नपाउदै अर्का छात्र अमृत विकले भन्नुभयो …
जनकल्याण माविले ल्यायो प्रदेश ५ मै उत्कृष्ट नतिजा
तुलसीपुर, कार्तिक २७ । दाङ तुलसीपुर १८ दुधरासमा रहेको जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयले प्राविधिक धार तर्फ उत्कृष्ट नतिजा ल्याएको दावि गरेको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यावसायीक तालिम परीषद्ले सेमेष्टर प्रणाली अन्र्तगत विभिन्न विषयको हालै नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । परीषद् सार्वजनिक गरेको नतिजा अन्र्तगत तीन बर्षे डिप्लोमा तहको सिभिल ईन्जीनियरीङको …
काठमाण्डौ – सरकारले ढिलै तर हतार गरेर राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ जारी गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०७६’ जारी भएको घोषणा गर्नुभयो । गएको सोमबार मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको शिक्षा नीति मन्त्री पोखरेलकै नेतृत्वमा ६ जनाको समितिले मस्यौदा गरेको …
पूर्व मेयरले गरे विद्यालयलाई ६ लाख सहयोग
तुलसिपुर,१० कार्तिक तुत्कालिन तुलसीपुर नगरपालिका संस्थापक मेयर शकर प्रसाद आचार्यले बीरेन्द्र माध्यामिक विद्यालय भ्युडहर सुनपुरलाई ६ लाख सहयोग गरेका छन् । आचार्यले आफ्ना स्वर्गीय बुवाले तत्कालीन समयमा पश्चिम दाङमा बिद्यालय खोल्न महत्त्वपूर्ण भुमिका खेलेको भन्दै बिद्यालयलाई एक कार्यक्रमका बिच नगद हस्तान्तरण गरेका हुन । आचार्यले सहयोग गरेको ६ लाख मध्य …
तुलसीपुर,१२ असोज । दशैंको विदा भईसक्दा समेत सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले तलव खान पाएका छैनन् । यस अघि दशैं विदा हुदा उनिहरुले तलव बुझ्दै आएका थिए । तर यसपाली उनिहरु रित्तो हात घर फर्किएका छन । मासिक रुपमा पाईन्न तिन महिनाको एकैपटक बुझिन्छ, अव कसरी खर्च चलाउने एक शिक्षकले भने । …
123 … 36 अर्को पृष्ठ »